46 Muhaajiriin Ethiopian ah oo Ku dhintay Badda Yemen | SAHAN ONLINE
46 Muhaajiriin Ethiopian ah oo Ku dhintay Badda Yemen
SHABWA- Hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalka ee IOM ayaa sheegtey in dooni siday 100 tahriibayaal oo ethiopian ah ay ku dejisay badda ka hor intii aysan gaarin xeebta gobolka Shabwa ee dalka Yemen, waxaana halkaasi ku dhintay 46 muhaajiriin ah.
Hay’adda ayaa sheegtay in muhaajiriin lagu khasbay inay degaan doonta ka dib markii hirar iyo dayblo ku kaceeen, islamarkaana uu khalkhal galay isku-dheelitirkii doonta. Muhaajiriinta ayaa isku dayay inuu u dabaashaan xeebta oo aad uga fogayd, taasi oo keentay in badan ku qaraqmaan.
” Doonidu waxay ka shiraacaatay magaalada Bosaso maalintii Talaabada ee 5tii bishan june 2018, 24 saac kadib ayayna dhacdadani dhacday. Doonidu waxay siday 87 rag ah iyo 17 dumar ah oo dhammaantood u dhashay qowmiyada oromada. 46 qof ayaa dhintay, 37 nin iyo 9 haween ah, waxaa la laayahay 16 qof oo la aamisan yahay inay dhinteen” Sidaas waxaa yiri Maxamed cabdiqadir oo ah Agaasimaha howlgalka iyo xaaladaha deg deg ah
IOM waxay kaloo sheegtay in 7000 kun oo muhaajiriin ah ka soo gudbaan bil walba, iyadoo boqol Kun oo muhaajiriin ah ay dalkaasi yemen gaaray sanadkii hore, iyagoo ka soo kicitimaya Xeebaha Somaliya.
dhinaca kale, Kumaankun muhaajiriin u dhashay wadanka Ethiopia ayaa soo gaaray Magaaladda Bosaso, kuwasoo isku diyaarinaya inay u tahriibaan dalka Yemen, iyagoo ka faa’iidaysanaya bisha Ramadaan oo la sheego in aad u dabco ilaalinta xuduudaha wadamada Carabta.